सिटिजन्स बैंकद्वारा गाईघाटको भुल्केमा एटिएम सञ्चालन
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले उदयपुरको गाईघाट स्थित १८ नम्बर बाहिनी अड्डा, भुल्केमा एटिएम. सेवा शुभारम्भ गरेको छ । अठार नम्बर बाहिनीका बाहिनीपति सहायकरथी कृष्ण प्रसाद सापकोटाले उक्त एटिएम सेवाको उद्घाटन गरे । उक्त एटिएम सेवाको सञ्चालनपश्चात ्उक्त बाहिनी अड्डाका सैनिक तथा त्यस क्षेत्र वरपरका जनता तथा सेवाग्राही...
फुङलिङमा सनराइज बैंक
काठमाण्डौ । सनराइज बैंकले आज बुधबार ताप्लेजुङस्थित फुङलिङमा १२९ औं शाखा संचालनमा ल्याएको छ । आज बुधबार आयोजित उद्घाटन समारोहमा फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर क्षत्रपटी प्याकुरेल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले संयुक्त रुपमा शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरे । उक्त कार्यक्रममा बैंकका अन्य पदाधिकारीहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो...
सिद्धार्थ बैंकको ७ शाखाहरूको औपचारिक उद्घाटन
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ बैंकले हिजो मंगलबार सप्तरी अवस्थित राजविराज शाखा, कल्याणपुर शाखा, सुनसरी अवस्थित इनरूवा शाखा र मोरङ अवस्थित महेन्द्र चोक शाखा, कञ्चनबारी शाखाको औपचारिक समुद्घाटन सम्पन्न गरेको छ र त्यसैगरी बैंकले २०७६ पौष ९ गते बुधबार दमक अवस्थित राजमार्ग शाखा र मोरङ अवस्थित पथरी शाखको औपचारिक समुद्घाटन सम्पन्न गरेको छ...
सिद्धार्थ बैंकको वार्षिकोत्सवमा छुट अफर
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले १७ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आफ्ना ग्राहकहरूको सुविधाको लागि विशेष छुटको योजना ल्याएको छ । सत्रौं वार्षिकोत्सव ९पौष ९ गते, बुधबार० लाई लक्षित गरी पौष ९ गते देखि माघ १० गते ३१ दिनसम्म बैंकले छुटको योजना ल्याएको हो । यस योजनामा ग्राहकहरुले दराजमा कार्ड मार्फत् सामान खरिद गर्दा १५ प्रतिशतसम्म...
काठमाण्डौ । एनआईसी एशिया बैंकले ललितपुरको सानेपामा नयाँ शाखा कार्यालयको आज मंगलबार औपचारिक उद्घाटन गरेको छ । ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २ स्थित सानेपा शाखाको सोही महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनबाट आज एक समारोहका बीच समुद्घाटन सम्पन्न भएको हो । उक्त शाखा सञ्चालनमा आएसँगै सो क्षेत्रका स्थानीयलाई बैंकिङ्ग सेवा...
काठमाण्डौ । सनराइज बैंक लिमिटेडले नवलपुरको मदनपुरमा ४१ औं र पिथौलीमा ४२ औं शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको सुरुवात गरेको छ । बफर जोन युुजर कमिटीका अध्यक्ष तथा समाज सेवी दोमन भण्डारी र कुमारवर्ती बिद्यालयको प्रधानाध्यापक दर्शन राज अमात्यले संयुक्त रुपमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन गरे । सोही दिन कावासोती नगरपालिका अध्यक्ष...
सिद्धार्थ बैंकद्वारा एकैपटक ५ शाखाको उद्घाटन
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ बैंकले आज सोमबार प्रदेश नं ५ अवस्थित लुम्बिनीमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले आजकै दिन सुनसरीअवस्थित दुहबी शाखा र गढी शाखा, सिरहाअवस्थित गोलबजार शाखा र लहान शाखाको औपचारिक समुद्घाटन सम्पन्न गरेको छ । बैंकको दुहबीशाखाको उद्घाटन दुहबी नगरपालिकाका मेयर बेद नारायण गच्छदार, गढी शाखाको उद्घाटन गढी...
एनएमबी बैंकद्वारा बीमा रकम भुक्तानी
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंकले गोरखा जिल्ला भिमसेन गाँउपालिका, वडा नं. ३ तान्द्राङ निवासी श्रीमती गंगादेवी सापकोटालाई निजको छोराको जीवन बीमा वापतको क्षतिपूर्ति बीमा रकम रु ७,००,०००। (सातलाख रुपैया ) हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । बैंकका कार्यकारी अधिकृत सुनिल के.सी तथा प्रमुख ब्यापार अधिकृत गोविन्द घिमिरे तथा प्रदेश ४ का प्रदेश प्रमुख, गणेश...
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र धापासीस्थित ग्रान्डी ईन्टरनेशनल अस्पताल प्रा.लि. बीच विभिन्न सेवा सुविधामा दिइने छुट सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंकले आफ्ना क्रेडिट र डेबिट कार्ड ग्राहकहरु तथा संस्थापक सेयरधनीहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार बैंकको क्रेडिट र डेबिट कार्ड ग्राहकहरु तथा बैंकका संस्थापक...
काठमाण्डौ । सनराइज बैंकले ग्राहकहरुको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड सेवाप्रदायकजस्तै भिसा र युनियन पे ब्राण्डहरुसँंग सहकार्य गर्दै आएको छ । त्यसै क्रममा बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड सेवाप्रदायक मास्टरकार्डसँग सहकार्य गरेको छ । बैंकले यस अघि नै भिसा तथा युनियन पे ब्राण्डका कार्डहरु जारी गर्दै आफ्ना...
सिद्धार्थ बैंकको मुर्लीचौक शाखाको औपचारिक समुद्घाटन
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ बैंकले आज आइतबार वीरगंजअवस्थित मुर्लीचौक शाखाको औपचारिक समुद्घाटन सम्पन्न गरेको छ । बैंकको मुर्लीचौक शाखाको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगंज शाखाका कायममुकायम निर्देशक सुरेश शिवाकोटी र सिद्घार्थ बैंकका सञ्चालक राजेश कुमार केडियाबाट संयुक्त रुपमा भएको थियोे । बैंकले मुर्लीचौक शाखा गत २०७५ चैत्र १० गते...
प्रभु बैंक लिमिटेडको तौलिहवा शाखा सञ्चालनमा
काठमाण्डौ । प्रभु बैंक लिमिटेडले आज आइतबार कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्त ुनगरपालिका वडा नं. १स्थित तौलिहवामा २०२औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकको तौलिहवा शाखा कार्यालयको समुद्घाटन कपिलवस्तु नगरपालिकाका मेयर किरणसिंहले एक समारोह बीच गरे । यो शाखासहित प्रभु बैंकको कुल शाखा संख्या २०२, एक्सटेन्सन काउन्टर संख्या ३८, शाखारहित सेवा...
एनएमबी बैंकको पूर्वस्वीकृत शैक्षिक कर्जामा थप नयाँ फिचर
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंकले शैक्षिक कर्जाको योजनालाई पूर्वस्वीकृत सुविधामा १५ वर्षसम्मको अवधिका लागि सतप्रतिशत लगानी र ४ वर्षसम्मको थप बिलम्बकालीन-ऋण स्थगन अवधि (मोराटोरियम) पनि थप गरेकोे छ । बैंकले ग्राहक÷विद्यार्थीहरूलाई विदेशमा अध्ययन गर्ने आकांक्षामा आर्थिक अभावको सामना गर्नु नपरोस् र न्यूनतम झन्झट र परिस्कृत...
एनआईसी एशिया बैंकको आइभीआर सेवा सञ्चालनमा, नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रमै पहिलो
काठमाण्डौ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले ग्राहक महानुभावहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेकोमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई थप परिस्कृत र अत्याधुनिक सेवा प्र्रदान गर्ने उद्देश्यले इन्टरएक्टिभ भोइस रेस्पोन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । ग्राहकवर्गले आइभीआर सेवा प्रयोग गरेर आफ्नो खातामा रहेको व्यालेन्स रकम, पछिल्लो तीन कारोबारको...
नेपाल उद्योग परिसंघ र सनराइज बैंक लिमिटेडबीच समझदारी
काठमाण्डौ । महिला उद्यमी व्यवसायीहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल उद्योग परिसंघ र सनराइज बैंक लिमिटेडबीच नेपाल उद्योग परिसंघमा एक समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समारोहमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सगम्र औद्योगिक विकासमा महिलाहरुको लगानी र दक्षता विकास गर्न...